ECDC – Eden Centre for Disabled Children
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဧဒင်မသန်စွမ်းသက်ငယ်များ ပြုစုရာရိပ်မြုံသည် ၂၀ဝ၀ ပြည့်နှစ်၊ ဧပြီလတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် ပထမဆုံးသော ပရဟိတအဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပါသည်။ ဧဒင်ရိပ်မြုံသည် အကျိုးအမြတ်မယူသော လူမှုအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါသည်။ ဧဒင်ရိပ်မြုံသည် လက်ရှိတွင် လူမှုဝန်ထမ်း ဦးစီးဌာနမှ အသိအမှတ်ပြု အဆင့် (၂) ရရှိထားပြီး ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် ပြည်တွင်း အရပ်ဘက် လူမှုအဖွဲ့အစည်းအဖြစ် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ကတည်းက တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားပြီး...
စေတနာ့ဝန်ထမ်းအနေဖြင့် ပါဝင်ခြင်း စီမံကိန်းများအတွက် ရံပုံငွေလျှောက်ထားခြင်း နည်းပညာပံ့ပိုးမှု Little Angle sponsor အထွေထွေ ပံ့ပိုးမှုပေးခြင်း အထွေထွေ ပံ့ပိုးမှုပေးခြင်း Extra miles
အောင်မြင်မှုများ မသန်စွမ်းကလေးဦးရေ ၂၀ဝ ကျော်အား မှတ်ပုံတင်ထားပြီး ထိုကလေးများသည် အတွေ့အကြုံရှိသော ကျွမ်းကျင်သူများပေးသည့်ဝန်ဆောင်မှုများကို ဧဒင်နေ့ ကျောင်းစင်တာတွင် ရရှိလျက်ရှိပါသည်။ မသန်စွမ်းကလေး ၂၅၀ အား ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ပင်မကျောင်းများတွင် တက်ရောက်နိုင်ရန်အတွက် ပံ့ပိုးပေးနိ်ုင်ခဲ့ပါသည်။ နိုင်ငံအနှံ့တွင်မသန်စွမ်းမှုဆိုင်ရာ စီမံကိန်း ၄ ခုကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး မသန်စွမ်းသူ (---) ဦး၊ ရပ်ရွာပြည်သူ (---) ဦး...
ဧဒင်မသန်စွမ်းသက်ငယ်များ ပြုစုရာရိပ်မြုံကိုရန်ကုန်မြို့ရှိကိုယ်အင်္ဂါနှင့် ဉာဏ်ရည်နိမ့် မသန်စွမ်းကလေးများလိုအပ်သည့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး၊ အထူးပညာရေး၊ လူမှုရေးရာစသည့် ဝန်ဆောင်မှုများ ရရှိစေရန်အတွက် မသန်စွမ်းမှုကို နှစ်မြုပ်လုပ်ကိုင်ကြသော မြန်မာနိုင်ငံသူ၊ နိုင်ငံသားတို့ကစတင် တည်ထောင်ခဲ့ကြသည်။ ဧဒင်ရိပ်မြုံသည် အကျိုးအမြတ်မယူသောပရဟိတအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါသည်။ ရန်ကုန်မြို့၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ဖော့ကန်ရပ်ကွက်ရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏ နေ့ကျောင်းရိပ်မြုံတွင် မသန်စွမ်းကလေး ၂၀ဝ ခန့်အားအရည်အသွေးပြည့်ဝသော ဝန်ဆောင်မှုများကို နှစ်စဉ် ပေးလျက်ရှိပါသည်။ မသန်စွမ်းကလေး ၂၀ဝ ကျော်ခန့်အား ၄င်းတို့နေထိုင်ရာ ရပ်ရွာများရှိပင်မကျောင်းများတွင် တက်ရောက်နိုင် ရန်အတွက် လိုအပ်သောပံ့ပိုးမှုများပေးလျက်ရှိပါသည်။ ဧဒင်ရိပ်မြုံသည် နိုင်ငံအနှံ့တွင် မသန်စွမ်းမှုဆိုင်ရာစီမံကိန်းများဖြင့် မသန်စွမ်းသူများထံသို့ အရောက်သွားနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ မသန်စွမ်းကလေးများအား တိုက်ရိုက်ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း။၊ မသန်စွမ်းမှုဆိုင်ရာအသိပညာပေးသင်တန်းများသာမကမသန်စွမ်းမှုဆိုင်ရာနည်းပညာသင်တန်းများပေးခြင်းတို့အပြင် မသန်စွမ်းမှုဆိုင်ရာအမြင်သစ် (လူမှုရေးရှုထောင့်အမြင်) ကို ဖြန့်ဝေခြင်း၊ နိုင်ငံတော်အဆင့် လူတိုင်းအကျုံးဝင် ပေါ်လစီများ ဖြစ်ပေါ်လာရေးအတွက် အရေးဆိုလှုံ့ဆော် စည်းရုံးမှုများဆောင်ရွက်ခြင်းစသည်တို့ကို တစိုက်မတ်မတ်ဆောင်ရွက်လာခြင်းဖြင့် နှစ်ပေါင်း ၂၀ အတွင်းတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် တိုးတက်ခဲ့ပါသည်။
ဧဒင်ရိပ်မြုံသည် မသန်စွမ်းကလေးများ၊ ထိုကလေးများ၏ မိဘများ၊ သူငယ်ချင်းများအနေဖြင့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ ဂရုစိုက်စောင့်ရှောက်မှု စသည်တို့ကိုရရှိခံစားနိုင်သောနေရာတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ ဧဒင်ရိပ်မြုံတွင် မသန်စွမ်းကလေးများ၊ ထိုကလေးများ၏ မိဘများ၊ သူငယ်ချင်းများသည် မိမိတို့ ခံစားနေရသော စိတ်ခံစားချက်များကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ် ဖော်ထုတ်နိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် အနာဂတ်မျှော်လင့်ချက်များ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုများ၊ ဘဝအဓိပ္ပါယ်များကိုရရှိစေမည်ဖြစ်ပါသည်။ စစ်မှန်သော လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအတွင်း ဝင်ဆန့်နိုင်မှုကို ကြုံတွေ့နိုင်ရန်၊ မြည်းစမ်းကြည့်နိုင်ရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ ဧဒင်ရိပ်မြုံသို့ ကြွရောက်လာကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
ECDC has worked with thousands of carers and professionals over the years.
Our participants come
from all walks of life and all parts ofsociety; particularly focusing building awareness about disability and increasing the skills and capacity of those developing policies, programmes and activities to support disabled people.
To ensure disabled children fulfill their potential, by providing them with high quality therapy, social care,
education and vocational training; and to equip families and caregivers with the skills, knowledge and experience to fully support the development of the child.Eden donate in Hakha.
To strengthen and empower the disability support sector (from grass root to national level),
improving services through awareness, training, evidence based research, networking & advocacy activitiesFor Eden to beabenchmark centre and leading resource for people with disabilities, through extensive and sustainable operations.